मुलुक सम्मुन्नत विकासको पथमा लम्किएको छ-प्रधानमन्त्री::Milap News
मुलुक सम्मुन्नत विकासको पथमा लम्किएको छ-प्रधानमन्त्री
वैशाख १ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नया बर्ष २०७६ को अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । आइतबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारबाट देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीलाई शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक सम्मुन्नत विकासको पथमा लम्किएको भन्दै २०७६ साल विशेष उपलब्धिमूलक बर्ष हुने बताए । २०७५ साल नीति निर्माण र विकासको आधार तयार गर्ने सन्र्दभमा पनि निकै उपलब्धिमूलक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले एक बर्षमा सरकारले कामै गरेन भन्नु भन्दा पनि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमको प्रगतीका बारेमा प्रश्न गर्न सुझाए । उनले भने, ‘सरकारलाई यसरी प्रश्न गरौ आउनुहोस् हामी सिकाउछौं । यो बर्ष के के काम भए ? नीति कति बने ? पहिले नचलेका विमानस्थल अहिले कति संञ्चालनमा आए ? आजैबाट सुरु हुने जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमले के लाभ दिन्छ ?’
तथ्य र तथ्यांकसहित व्यवहारबाट जवाफ दिन सरकार सधैं तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सुशासनको शत्रु भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले ‘भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने, भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने, आफ्नो दृढ सार्वजनिक घोषणा भएको उल्लेख गरे । उनले राज्यको सम्पति माथिको अनधिकृत दोहनलाई सरकारले छुट नदिने बताए ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई चुनौतीपूर्ण भएकाले लामै समय लिने भएपनि जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि भ्रष्टाचार उन्मुलन गरी छाड्ने अभियानमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाए । सम्बृद्धिको पूर्वशर्त शान्ति भएको भन्दै उनले शान्तिका लागि बितेको वर्षमा मुलुकले राजनीतिक रुपले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे ।
यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ:-